EyoMsintsi 19, 2018 admin
Ukuthembeka CEO iveze iimveliso crypto
Ukuthembeka Investments CEO uAbhigali Johnson iye yabonisa ukuba le nkampani ukusebenza kwiqela cryptocurrency ezinxulumene-blockchain iimveliso kunye neminikelo, kunye ukukhululwa zawo zimiliselwe tentatively kuba ngaphambi kokuphela konyaka. I-CEO uthe "Ndinento izinto ezimbalwa kusendleleni, izinto ezimbalwa zenziwa ngokuyinxenye kodwa uhlobo kwi kweshelfu kuba akukho ngokwenene ngexesha elifanelekileyo. Siyathemba ukuba ezinye izinto ukubhengeza ekupheleni konyaka. "
Ukuthembeka ibisoloko yenye yeenkampani ezinkulu ambalwa rhoqo yaye uphawu ekuhleni umdla yayo crypto, kwaye CEO wahlabela mgama ukhankanye "Yintoni waqala wakha uluhlu olude lwe Ukusebenzisa nokuba Bitcoin, Ethereum, nezinye cryptocurrencies, okanye nokubakho nje ekrwada technology blockchain. Inkoliso yabo iye zilahlwe ngoku okanye ubuncinane ubeke phezu kwithala. Izinto ngokwenene abaseleyo na izinto Ndicinga ukuba sasilindele. Siye babezama ukumamela yentengiso yaye balindele oko ebengayi kuba nantsingiselo. "
UK Treasury: “Crypto-asethi” udinga lawulo
Bitcoin kunye nezinye iimali digital i “Wild West isimo” kwaye kufuneka ukuba silawulwe ukukhusela abazalisi, ikomiti laMalungu ubongoze. Iingxaki zibandakanya amanani simbi, ukhuseleko lwabathengi lokugcina kunye imingcipheko kusiko kunye nemali-lokuxhaphaza, uthi iKomiti Treasury. Le komiti uthe bekungekho cryptocurrencies esebenza kakuhle kwaye bakhetha ukuba baye kubabiza “crypto-asethi”. Ziyabongozwa lo njengonogada isixeko, i wokuqhuba Financial, lokugada kwabo.
Ngoku, i Inombolo akanamandla okulawula mhlawumbi benkampani yawo ezi mpahla okanye yokutshintshiselana kwi apho wasebenza. “zimali ye crypto-asethi kungoku banikezwa ukhuseleko oluncinane kakhulu ukusuka ocace lweengozi. angala, akukho iindlela ezisesikweni ukulungisa yabathengi, okanye imbuyekezo.” Uthe iKomiti Treasury. Nicky Morgan, Ungumhlali- ikomiti, wathi: “Yinto enethuba ukuba urhulumente kunye nabalawuli ukuba bumble kunye ukukhutshwa izilumkiso abaphelelweyo izimali, kodwa phindo angaphathi. Xa ubuncinane, ummiselo mawuqwalasele ukhuseleko lwabathengi kunye anti-imali-emthethweni.”
NASDAQ ozuza crypto lobuhlobo Swedish fintech Cinnober
NASDAQ, yesibini ngobukhulu istock exchange ehlabathini, NgoLwesihlanu wamemezela ukuba kwimisebenzi bafumane Cinnober, umniki isisombululo urhwebo esekelwe e Sweden. Cinnober unembali for bullishness malunga asethi digital nokwenza kube lula ukuba amaziko ukutyala kuzo. Omnye wabo mizamo ubambiswano kunye BitGo, a IBhehemote sokhuseleko zeziko-grade cryptocurrency lokukhulisa.
latest amagqabantshintshi zokuzuza NASDAQ kaThixo, nangona ngokungangqalanga kule meko, incasa yawo ukuze urhwebo cryptocurrency. Cinnober, ngoxa kunomfana ngokwalo, kuba urhwebo isisombululo provider ukuya nokubizwa clearinghouses. Umzekelo, BitGo qonga kakuhle oluhambelana abatyalimali ezinkulu kumaziko e NASDAQ. I-multi-utyikityo ukhuseleko nokugcinwa isisombululo kunye BitGo uye wenza omnye ethandwa kakhulu kwisithuba. inkonzo njengomgcini cryptocurrency Cinnober kaThixo kungaba yenye iingalo ezininzi awayesibawela yokufunyanwa, neenkxalabo phezu kweso ziye zenza abatyali ezininzi yeziko uhayi.
Ingxelo Daily Market Kraken for 18.09.2018
$126M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
"Bitcoin ukululama zehle,...
Stephan Sconyers uthi:
EyeDwarha 17, 2018 e 5:43 PM